Maarso, 2009 cadastre, Microstation-Bentley
Waxaan horay u hadlay of logic iyo asalka ah ee Bentley Cadastre, taas oo laftiisa waa codsi ah Bentley Map maaraynta maareynta dhulka oo ka faa'iideysanaya kaabayaasha xfm iyo xakamaynta topolojiga.
In my opinion (shakhsi), hirgelinta Bentley Cadastre degan qiiq shisheeye waa in bilowdo ka xoq socda, waxa ay noqon fudud kuwa ognahay Bentley Map ama ugu yaraan loo isticmaali karaa Microtation Geographics. Sidaan horay u sheegay, waxay leedahay wax badan oo ay ku siiso (in ka badan waxaad filan karto) laakiin ka hor inta isticmaalaha caadiga ah wuxuu kuu keenayaa su'aal asaasi ah oo asaasi ah:
Sideen u fuliyaa tan?
Marka loo eego codsiga dadka isticmaala, Bentley wuxuu fuliyay waxa la yiraahdo Schema Wizard, kaas oo hagaya talaabo talaabo tallaabo abuuraya qaababka saadaaliga ah ee nidaamyadeeda lagu keydin doono xml loogu magac daray faylka schema. Tani waa waxa laga qaban lahaa Maamulaha Geospatial, kaas oo aan horay uga hadalnay iyo habab ahaan loo tixgelin karo in jiheeyahani uu yahay hagaajinta habka loo marayo user, laakiin ka dibna codsigaas ayaa la sii hagaajin karaa.
Macquulnimadu waxay la mid tahay tan AutoCAD Meelaha 3D ee joogtada ah ee abuuritaanka santuuqa, oo aan ka hadlay markii aan muujinnay abuurista shaxda iyo shaxda masaafada, laakiin maahan mid fudud. Aan aragno sida Schema Wizard u shaqeyso
Si aad u bilawdo, tag "bilaabida / dhammaan barnaamijyada / Bentley / Bentley Cadastre / Bentley Cadastre Schema Wizard"
Ka dibna guddiga soo dhaweynta waa inay soo baxaan taas oo ina siinaysa ikhtiyaarka ah inaan sii wadno, joojino ama la tashano gargaarka.
Tallaabada xigta waxaad weydiisaa waxa feylka abuurka la shaqeyn doono. Bentley ayaa ku magacawday "faylka abuurka" astaamaha feylka ka yimid cutubyada qiyaasta, qaababka xaglaha, isbedelka heerarka (lakabyada) si loo qiyaaso iyo haddii faylka uu noqon doono 2D ama 3D. Bentley by default waxay keenaysaa qaar ka mid ah faylasha abuur diyaar u ah "faylasha barnaamijka / Bentley / shaqada / nidaamka / abuur".
Hadda, faylka abuurka ee aad codsanayso kiiskan waa xml, taas oo ah, foormo abuur ah ee xfm.
Tan darteed waxaa sidoo kale jira faylal abuur qaar ka mid ah "C: Dukumiintiyada iyo Nidaamyada Dhammaan xogta Barnaamijka Adeegga Bentley WorkSpace Mashaariicda Tusaalooyinka Geospatial BentleyCadastre waxay baabi'isaa qorsheyaasha abuur" waxayna u yimaadaan tusaalooyin:
Xaaladdan waxaan isticmaali doonaa Dhibbanaha.
Maxaa loo qaabeynayo
Laga soo bilaabo halkan, gudida qaabaynta ee lakabada sare ee jirka ayaa u muuqata in ay ku kaydinayso warqadaha loo baahan yahay si loo qeexo:
Magaca lakabka sare ee dhalada, marka la eego "dhul", kiiskan ayaan ugu yeeri doonaa "hantida"
Sidoo kale weydii magaca mashruuca, waxaan ugu yeeri doonaa "Catastro_local2"
Ka dibna weydii magaca qaybta, waxaan ku magacaabi doonaa "Cadastre"
Ugu dambeyntii magaca shaqada (goobta shaqada), waxaan u wici doonaa "ms_geo"
Guddiga xiga waa inuu qeexo sifooyinka waxyaabaha ka mid ah qaababka nooca xiran (Baddlo badan):
Magaca class fasalka, waxaan ugu yeeri doonaa "Poligono_de_predio", ma aqbalo jilaa gaar ah
Magaca meelaha la xisaabiyey, waxaan u yeeri doonaa "aagga_calculated"
Qeybaha cabbirka, waxaan isticmaali doonaa mitir laba jibbaaran waxaanan ku magacaabi doonaa "m2"
Kadibna waxaad ku dari kartaa qaababka kale ee loogu talagalay warqadaha sirqoollada
Bentley mar walba waxay ilaalisaa qiiqa ka mid ah qaababka labadaba, sida guddi hore ama "nood-xuduud" taas oo ah fikrada ah aroid centroid gudaha meel sare oo la xiray laakiin waxay noqon kartaa walxo toosan oo aan qaabeyn qaab. Dabcan labadoodaba looma wadaagi karo iskudhafka isku midka ah, sidaa darteed guddiga xiga waa in la isku hagaajiyo habka looxyada (Xarfaha):
Qalabka qaylo dhaansiga ah waxaan ugu yeeri doonaa "xuduudaha"
Miisaanka xisaabinta ee xuduudaha ayaan ugu yeeri doonaa "length_calculated"
Dabadeedna wuxuu iga codsanayaa haddii aan doonayo in calaamadahaas lagu muujiyo geometric lining
Gudiga xiga waa inuu dejiyaa sifooyinka faylka ee walxaha nooca noodka ah (Dhibco), tani waxay la wadaagi kartaa lakab isku mid ah oo leh xajmiga xuduudaha iyo weliba qaababka.
Isku mid ah sida kor ku xusan, codso ikhtiyaarka haddii aad rabto inaad calaamadiso iyo magaca beerta qaabka xml
Ugu dambeyntii waxay muujineysaa guddi natiijooyinka qaabeynta loo sameeyay si aan u badbaadin karno faylka schema. Xusuusnoow in hadda aan sameynay lakab kale, laakiin qaar kale ayaa lagu dari karaa badhanka "lakabka" adigoo ku jira lakabka juqraafi, xajmiga magaalooyinka, xaafad, deegaan, degmo, qaybta, khariidadda iwm.
Waxaan wici doonaa qorshaha "Cadastre_local2" oo riix badhanka "Finish"; shaashad madow waxay u muuqataa in ay kaydineyso wax kasta oo aan dhammeeyno.
Haddii aan fiirino, hadda xiriirka mashruuca la qaabeeyey ayaa loo abuuray sida lagu arkay sawirka. Tani waa waxa horay loo sameeyay iyadoo la abuurayo faylka "ucf" oo lagu keydiyay qoraalka user ee goobta shaqada, sida ku cad shaxanka labaad,
Marka laga hadlayo, markaad soo galeyso, mashruuca wuxuu furan yahay galka la abuuray, xataa wuxuu keenaa faylka tusaalaha. Eeg in xilligan la joogo macmiilka iyo interface waxaa lagu qeexay haddii aanu qeexnay.
Halkaas waxaa ku yaala, topolojiyada ugu hooseeya ee lagu abuuray guddiga saxda ah, qalabka Bentley Cadastre iyo diyaar u ah inay shaqeeyaan. Guddi ayaa sidoo kale loo soo bandhigaa si ay ugu xidhmaan xog ururin markii ugu horeysay.
Waxaa cad in tani ay tahay fududeynta aasaasiga ah ee faylka shema si ay ula shaqeeyaan mashruuca cadastral ah, waa cad in Maamulaha Geospatial uu sidan u sameyn karo wax yar oo xanuun badan isla markaana u habeynaya kan ugu sarreeya. Waxaan arki doonaa maalin kale.
Marka la soo koobo, horumar la taaban karo in hab si user Bentley Map ama MicroStation, ugu yaraan la abuuro of qaab topological aan xfm ka xoq la Maamulaha Geospatial iyo abuurista CFU mar.
Xitaa sidaas, su'aasha isticmaalaha waxay sii ahaaneysaa: Hagaag, hadda ma tahay inaad sawir qaadato? sababtoo ah arrintani way gaaban tahay sida buugyada loo sameeyay, ujeeddooyinka daaqadaha iyo maaha inay si fiican u socdaan.
Waxa ay sii wadaa in uu barto wax kasta oo uu ka sameeyo dhinaca isticmaalaha ee ku saabsan heerarka fayadhowrka iyo sifooyinka asaasiga ah ee Bentley Map sida falanqeynta farsamada ama mawduuca.
Post Previous«Previous Isbarbardhiga barnaamijka CAD
Post Next Kuwa ugu wanaagsan ee 4tas. GvSIG ...Next »
4 Jawaab: "Bentley Cadastre, Schema Wizzard"
Hello Agustín, weli wali waxaa la isticmaalayaa xfm?
Inkastoo inkasta oo wax cusub la cusbooneysiiyay tan iyo markii uu ka soo baxay machadka kaas oo kor u qaaday oo uusan cidna fahmin mawduuca .. Anigu waxaan isku hagaajinayaa nafsad ahaantiisa, laakiin wax yar baa ...
Ahaye lamaanahaaga, wakhti aan adiga wax kaa maqal. Wali ma isticmaalaysaa mashruuca lagu sameeyay xfm?
Hello G! ... waxaan mar hore rabay inaan ogaado sida khariidadaha loo sameeyay xfm ...